Somaliland: Cali-Sandulle Muxuu Saluugsan yahay.! Ma Somaliland Mise Xukunka Muuse Biixi.? - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Cali-Sandulle Muxuu Saluugsan yahay.! Ma Somaliland Mise Xukunka Muuse Biixi.?
Siyaasiga Cali Maxamuud Xasan (Cali-Sandulle) oo ka tirsan Xisbiga talada haya ee Kulmiye horena Xilal Wasiirnimo uga soo qabtay Xukuumadihii Somaliland soo maray ee Madaxweyne Rayaale iyo Madaxweyne Siilaanyo, ayaa Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi ku eedeeyey inuu yahay Hoggaamiye Ciidan oo aanu dalka iyo dadka waxba ku soo kordhin 120-ka cisho ee ay Xukuumaddiisu dhisnayd.
Waxa uu Cali-Sandulle oo maanta Warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ka hadlay qodobbo badan oo kala duwan, isaga oo ka jawaabay su’aalo dhawr ah oo la weydiiyey, Dhalliilo kulul, ayaanu u jeediyey Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, isla markaana waxa uu ka hadlay xaalado ka taagan gobolka Sool iyo in la bilaabo wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya.